हराएको वा बिग्रेको SIM/RUIM कार्ड परिवर्तन गर्दा रु. ५०।– मात्र - Doorsanchar
हराएको वा बिग्रेको SIM/RUIM कार्ड परिवर्तन गर्दा रु. ५०।– मात्र
Abhinaya Ghimire December 1, 2015	116 Views
नेपाल टेलिकमले मंसिर १० गते देखि GSM/CDMA मोबाइलको हराएको वा बिग्रेको SIM or RUIM कार्ड परिवर्तन गर्दा रु. ५०।– मात्र शुल्क लिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी रिचार्ज नगरी Validity सकिएर Pool/Frozen Stage मा गएका SIM or RUIM कार्ड पुनः Activate गरी संचालनमा ल्याउदा रु. ९०।– मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी Activate गरिएको नयाँ SIM/RUIM कार्डमा रु. ५०।– Talk Value हुने छ ।
यो भन्दा पहिले हराएको वा बिग्रेको SIM/RUIM कार्ड परिवर्तन गर्दा रु. १००।– र Pool/Frozen Stage मा गएका SIM/RUIM कार्ड पुनः Activate गरी संचालनमा ल्याउदा रु. २००।– शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।
editor'spick Nepal Telecom	2015-12-01
Next Ncell’s Ramailo sms offer…
June 22, 2016	31,129
July 6, 2016	27,054
July 20, 2016	19,606
June 18, 2014	13,798
May 4, 2014	10,071
May 12, 2014	8,798